Pink Champagne Keke Nemashuga Bubbles - Sugar Geek Show - Cake
Pink Champagne Keke
Iyi pink champagne keke inoshamisa uye ine hunyoro nekutenda kune champagne chaiyo yakasanganiswa mubatter! Uye nekuda kwekuti ini ndoda kuwedzera, ini ndakasanganisira mamwe mabhuru eshuga uye giravhiti-inozvidza champagne bhodhoro! Goredzva Rakanaka!
Pink champagne keke keke hombe yekushandisa kune chero mhemberero. Iko kune chaicho chimwe chinhu nezve iwo marangi epinki ekeke anodanidzira kupemberera! Ini ndakagadzira iyi pink champagne keke yeEvha yeGore Idzva asi ichokwadi hukuru hwekeke chero nguva. Paired neyangu nyore buttercream kutonhora nekubata kwemamlasses kudziisa zvinwiwa.
Zvishandiso & Zvekushandisa
Ingoitika kana iwe uchida kuwedzerwa seni, heino runyorwa rweese maturusi uye zvigadzirwa zvandaishandisa kugadzira giravhiti yangu ichishora champagne keke.
1/8, Armature Wire
Acrylic Keke Riser
Yakagadzirira Kunyauka Isomalt
1/4 ″ Woodow Dowel
Champagne Keke Zvidimbu
Ini ndashandura iyi yekubheka kubva kune yangu inozivikanwa pink velvet keke asi ndakadzora shuga zvishoma ndikawedzera imwe waini kunhuhwirira uyezve, champagne kune recipe. Ndakagadzira champagne keke rangu repinki asi unogona kusvetuka zvachose kana uchida. Ruvara harukanganisi kunaka.
Ndeipi Iyo Yakanakisa Champagne YeChampagne Keke?
Wanga uchiziva here kuti haasi ese mashampeni akafanana? Zvinosiyana zvakanyanya kubva kusanyanya kutapira (hutsinye hunhu) kutapira kwazvo (demi sec). Kune iri champagne keke, chero chinhu chiri pakati penzira chiri kuzoshandira iresipi. Tarisa izwi rekuti 'brut' pabhodhoro. Kana iwe ukashandisa inotapira shampeni senge demi-sec, deredza shuga mune yekubheka ne1 Tablespoon kuverenga izvo zvinowedzera kutapira.
Chii chinonzi pink champagne keke rinonaka?
Zvakanaka, zvinosetsa iwe unofanirwa kubvunza. Pink champagne keke inonaka senge… Champagne! Ipo kune vakawanda haina kuravira chaizvo sekusimudza uye kunwa girazi remushamba unoshamisira, ine kuravira kwakasiyana uko kune manotsi eanotapira vanilla flavour nekamwe tangy-ness yakasanganiswa mukati.
Ndekupi kuzadza kwandinofanira kushandisa nekepinki champagne keke?
Pink champagne keke inoyevedza inoenderana nekuzadza kuenda asi inowanzoita vaviri zvakanakisa nemichero yekuzadza senge sitirobheri buttercream uye kirimu bhatiri senge yangu shava shuga buttercream kutonhora . Iyo zvakare inowirirana zvakanaka ne chena chokoreti buttercream .
Iko keke ye pink champagne ine doro mariri?
Pasina kupinda musainzi yezvose, mhinduro ndihungu. Paunenge uchibheka 6 ″ kana 8 ″ marata, iyo keke inochengetedza ingangoita gumi muzana yezvinhu zvine doro. 10 ″ makeke kana kukura doro rinobikwa. Kana iwe uchinetseka nezve chero doro rinosara mukeke rako, unogona kushandisa champagne kuravira pane champagne chaiyo. ndinoshandisa Lorann Mafuta Anopenya Waini Kunaka .
Pink Champagne Keke Nhanho-Nhanho
Nhanho 1 - Gadzira makeke . Preheat oven kusvika 335ºF uye gadzirira matatu 6 x2 ″ mapani ekeke nawo keke goop kana chero mhando yepani kuburitswa iwe yaunoda.
Nhanho 2 - Shandisa chiyero kusvika pima zvigadzirwa zvako (kusanganisira zvinwiwa) kunze kwekunge zvarairwa neimwe nzira (Matipuni, mashupuni, pini nezvimwe). Metric zviyero zviripo mune yekubheka kadhi. Zviyero zvakaunganidzwa zvakanyatsojeka kupfuura kushandisa makapu uye kubatsira kuona budiriro yeresipi yako.
fondant yakaoma kushanda nayo
Nhanho 3 - Sanganisa hupfu, shuga, poda yekubheka, pasoda, uye munyu mundiro yemusanganisi wemira pamwe neshongedzo yepaddle. Sanganisa masekondi gumi kuti ubatanidze.
Nhanho 4 - Sanganisa mukaka nemafuta pamwe chete woisa parutivi.
Nhanho 5 - Sanganisa mazai machena, waini inonhuhwirira, champagne, uye vanilla pamwechete, whisk kuputsa mazai, woisa parutivi. Wedzera mune yepinki chikafu chevara manje kana iwe uchida kuti keke rako rive repink. Kuisa parutivi.
Nhanho 6 - Wedzera bhotoro rako rakapfaviswa kune zvakasanganiswa zvakaoma uye sanganisa pazasi kusvikira musanganiswa wakaita sejecha rakakora (anenge masekondi makumi matatu).
Nhanho 7 - Wedzera mumusanganiswa wako wemukaka / wemafuta uye mira kuti usanganise kusvikira zvigadzirwa zvakaomeswa zvonyoroveswa wozobondera kuna med (kuisa 4 paKitchenaid yangu, kuisa imwe pachifuva) uye rega itosanganise kwemaminetsi maviri akazara kukudziridza chimiro chekeke. Kana iwe ukasarega keke rako richisanganiswa padanho iri keke rako rinogona kupunzika
Nhanho 8 - Peta ndiro yako wobva waderedza kumhanya kusvika pasi. Wedzera muzai rako chena musanganiswa mumatatu matatu, uchirega batter ichisanganisa kwemasekondi gumi nemashanu pakati pekuwedzera.
Nhanho 9 - Govana mumakeke ako epake uye ubike kwemaminetsi makumi matatu kusvika makumi mana kana kusvika gonyo rinobuda pakati nepakati zvakachena. Kumwe kuderera kuri zvakajairika.
Nhanho 10 - PASI PEDYO BATA KEKE PAN ZVIMWARI pane pakaunda kamwe kuburitsa hutsi kubva kukeke. Izvi zvinomisa keke kubva kudzikira zvakanyanya. Isa makeke mufiriji isina kuvharwa kwemaminitsi makumi matatu kuti upenye iwo iwo kana uchida kuashongedza ipapo kana kuaputira mupurasitiki nekuputira kusvikira waakuda.
Brown Shuga Nyore Buttercream
Nhanho 1 - Isa mazai evachena neshuga yeupfu mundiro yesimeter yako yekusanganisa ne whisk attachment yakasungirirwa uye chikwapuro kumusoro kwemaminetsi mashanu.
Nhanho 2 - Tanga kuwedzera muhotela yako (yakapfava) mumachunks painenge ichirova kusvikira bota rese rawedzerwa. Wedzera mune yako munyu, molasses, uye vanilla.
Nhanho 3 - Ramba uchirova kusvikira buttercream isingaoneke kunge yakakombama uye iri fluffy uye chena. Izvi zvinogona kutora kusvika pamaminetsi gumi nemashanu zvichienderana nemusanganisi wako. Kana ikaravira bhotoro, ramba uchisanganisa.
Nhanho 4 - (OPTIONAL) chinja padanda rekubatanidza uye sanganisa pazasi kwemaminetsi gumi kusvika gumi nemashanu kubvisa mabhuru kubva kuchando. Frosting ichave yakapfava uye izvi zvakajairika.
Pro-Tip: Kana bhotela rako rinotonhora uye riri kunamatira kune ndiro, tora kapu imwe uye microwave iyo kwemasekondi makumi matatu. Dururira iyo inodziya buttercream kumashure mukati meiyo inosanganisa ndiro uye iyo inobatsira iyo buttercream kurova kumusoro uye kuve akareruka uye fluffier.
Maitiro Ekushongedza Iyo Champagne Keke
Nhanho 1 - Frost keke rako. Isa makeke ako neinenge 1/4 ″ yetiraivhi uye wozora jasi rakagwamba (rakatetepa rakaita buttercream). Chill keke rako kwemaminetsi gumi nemashanu wozoshandisa jasi rako rekupedzisira rebutakirimu uye riitsvedzere neako rinokanganisa spatula uye bhenji rinotsvedza.
Kana iwe uchida rumwe ruzivo nezve maitiro echando keke tarisa yangu kugadzira keke rako rekutanga vhidhiyo.
Nhanho 2 - Gadzira matema ako. Sungunusa anenge matanhatu maunzi emasimimi makeke akajeka isomalt mune isina kupisa mudziyo. Ini ndakawedzera munenge 1/4 tsp yegoridhe inoyevedza guruva kuti ipe iyo isomalt muvara we champagne.
Nhanho 3 - Seal yako sphere kuumbwa pamwechete. Dururira isomalt yakanyungudutswa muforoma murukova rwakaonda. Wobva wadzora chakuvhuvhu pamusoro uye kudurura yakawandisa isomalt. Rega iyo mold idonhedze zvachose wozoisa parutivi kuti itonhore zvizere. Kana iwe usina 3D sphere mold, iwe unogona kushandisa iyo hafu-sphere molds uye ingozvinamatira pamwe chete zvinyoro nyoro kudziya kumucheto pane inopisa ndiro uye kusundira mativi maviri pamwechete.
Kune madiki madiki, ini ndakangovasiya vakasimba. Iwe unogonazve kupeta ruoko-roll spheres kana kushandisa madiki macandi panzvimbo yemahara.
Cheka nubhu kubva panharaunda nebanga rinopisa (kupisa netochi yekicheni) kana kungovanza nubwo paunoisa kukeke. Ini zvakare ndakadurura imwe isomalt muhafu-sphere muforoma.
Nhanho 4 - Wedzera yako donhwe. Ndiri kushandisa nyore kudonha asi unogona zvakare kushandisa mvura ganache uye upende iro goridhe. Ini ndanyungudika drip mu microwave kwemasekonzi makumi matatu uye gumi neshanu-masekondi ekuwedzera kusvikira yaita mvura. Rega drip itonhorere pasi kuitira kuti itore zvishoma asi ichiri mvura. Iwe unogona kuita bvunzo yekudonhedza pane yako chilled keke kuti uone kuti ndiyo chaiyo kuenderana.
keke remuchato keke uchishandisa musanganiswa wekeke
Nhanho 5 - Isa sadza mukeke rako rinotonhora kusvikira rasara rakatarisana nebhodhi repazasi uye richeke kuitira kuti rienzane nepamusoro pekeke. Isa 1/4 ″ mudonhwe wedanda mumashanga uye wochimisa kubva pa3 ″ kubva pamusoro pekeke.
Nhanho 6 - Tepi chidimbu chesimbi yemaoko kuchidziro iyo ingangoita masere masere pakureba uchishandisa aruminiyamu foil tepi.
Nhanho 7 - Wedzera mamwe madonhwe pasi peiyo foil kusvikira yavhara kana kuti unogona kuikwesha nebhurasho rependi.
Nhanho 8 - Wedzera bhodhoro remaspagne risina chinhu kumusoro.
Nhanho 9 - Batanidza matema ako kukeke nekairi kirimu. Sunga mabhuru kune mumwe nemumwe uchishandisa isomalt diki yakanyungudika. Ini ndaishandisa silicone chishandiso chekubata pane iyo isomalt. Iwe unongoda shoma shoma.
Haisi iyo yakanyanya kunaka pink pink champagne keke iwe yawakamboona! Ini ndinonzwa kunge mafoto haangoiti ruramisiro. Ini ndinoda mabudiro anotaridzika uye kudonha kwakanaka kwazvo!
Ndizivisei mune zvakataurwa kana iwe ukagadzira iri keke uye usakanganwa kundimaka mune ako maposvo! Goredzva Rakanaka!
Brown Shuga Swiss Meringue Buttercream
Champagne Bhodhoro Keke Kudzidzisa
Chena Chocolate Buttercream
Mvura Ganache Kudonha
Pink champagne keke ine brown shava nyore buttercream, shuga matema uye giravhiti inozvidza champagne bhodhoro! Gadzirira Nguva:gumi neshanu mins Nguva Yakabika:30 mins Nguva Yese:Chechina mins Makorori:1817kcal
▢13 oz (368 g) upfu hwekeke
▢10 oz (284 g) shuga
▢1 Tapepoon poda yekubheka
▢1/2 teaspoon soda yekubikisa
▢6 ounces (170 g) unsalted ruomba imba temp
▢4 ounces (113 g) buttermilk imba temp
▢6 oz (170 g) champagne imba temp
▢4 ounces (113 g) mazai machena imba temp
▢1 tsp vanilla yakabudiswa
▢1 1/2 tsp inopenya waini pipi inonaka (kusarudza) batanidzo link: https://www.amazon.com/dp/B007BIDREU/?ref=exp_sugargeekshow_dp_vv_d
▢1-2 madonhwe yemagetsi pink chikafu chikafu sarudzo kana iwe uchida pink champagne keke
Brown Shuwa Nyore Buttercream Kutonhora
▢8 oz (227 g) Pasteurized Mazai Varungu
▢32 oz (907 g) Bhuru risina kuvhurwa
▢32 oz (907 g) Yakakanyiwa Shuga
▢1 Tapepoon Molasses
▢piri mashupuni vanilla yakabudiswa
▢1/8 'Armature Waya
▢1/4 'danda rematanda
Preheat oven kusvika 335ºF. Ita shuwa kuti zvese zvigadzirwa (champagne, mazai, bota) zviri tembiricha yemukati
Shandisa chiyero ku pima zvigadzirwa zvako (kusanganisira zvinwiwa) kunze kwekunge zvarairwa neimwe nzira (Matipuni, mashupuni, pini nezvimwe). Metric zviyero zviripo mune yekubheka kadhi. Zviyero zvakaunganidzwa zvakanyatsojeka kupfuura kushandisa makapu uye kubatsira kuona budiriro yeresipi yako.
Gadzirira matatu 6'x2 'mapani ekeke nekeke goop kana imwe inodiwa pani spray. Zadza mapani ako nezve 3/4 yenzira izere nebatter.
Sungai mukaka nemafuta pamwe chete uye sarudzai parutivi.
Sungai mazai machena, waini inonaka, champagne uye vanilla pamwe chete, whisk kuputsa mazai, nekuisa parutivi. Wedzera mune yepinki chikafu chevara manje kana iwe uchida kuti keke rako rive repink. Kuisa parutivi.
Wedzera bhotela rako rakapfaviswa kune zvakaoma zvinoshandiswa uye sanganisa pazasi kusvikira musanganiswa wakaita sejecha rakakora (anenge masekondi makumi matatu). .
Wedzera mumusanganiswa wako wemukaka / wemafuta uye mira kuti usanganise kusvikira zvigadzirwa zvakaomeswa zvonyoroveswa wozobhururuka kusvika kumamita (kumisikidza 4 pane kitchenaid yangu, kuisa imwe pachifuva) uye rega itosanganise kwemaminetsi maviri akazara kukudziridza chimiro chekeke. Ukasarega keke rako richisanganiswa padanho iri keke rako rinogona kupunzika
Nyorura ndiro yako uye wozodzora kumhanya kusvika pasi. Wedzera muzai rako chena musanganiswa mumatatu matatu, uchirega batter ichisanganisa kwemasekondi gumi nemashanu pakati pekuwedzera.
Govana mumakeke ako epake uye ubike kwemaminetsi makumi matatu kusvika makumi mana kana kusvika gonyo rinobuda mukati zvakachena. Kumwe kuderera kuri zvakajairika.
PASI PEDYO BATA KEKE PAN PASIMBA pane pakaunda kamwe kuburitsa mweya kubva kukeke. Izvi zvinomisa keke kubva kudzikira zvakanyanya.
Isa mazai machena uye hupfu hwakatsetseka mundiro yemira yako musanganisi ne whisk chinamatira chakabatanidzwa uye chikwapuro kumusoro kwemaminetsi mashanu
Tanga kuwedzera muhotela yako (yakanyoroveswa) mumachunks painenge ichirova kusvikira iyo bhotoro yawedzerwa. Wedzera mune yako munyu, molasses, uye vanilla.
Ramba uchirova kusvikira buttercream isingaoneke kunge yakakombama uye iri fluffy uye chena. Izvi zvinogona kutora kusvika pamaminetsi gumi nemashanu zvichienderana nemusanganisi wako. Kana ikaravira bhotoro, ramba uchisanganisa.
(OPTIONAL) chinja kune padhedhi chinamatira uye sanganisa pazasi kwemaminitsi gumi nemashanu kusvika gumi kubvisa mafema kubva kuchando. Frosting ichave yakapfava uye izvi zvakajairika.
Zvinhu Zvakakosha Kuti Ucherechedze Usati Watanga 1. Uya nezvinhu zvako zvose ku tembiricha yekamuri kana kunyangwe inodziya (mazai, buttermilk, batare, nezvimwewo) kuona kuti batter yako haiputse kana kupwanya. 2. Shandisa chikero ku pima zvigadzirwa zvako (kusanganisira zvinwiwa) kunze kwekunge zvarairwa neimwe nzira (Matipuni, mashupuni, pini nezvimwe). Metric zviyero zviripo mune yekubheka kadhi. Zviyero zvakaunganidzwa zvakanyatsojeka kupfuura kushandisa makapu uye kubatsira kuona budiriro yeresipi yako. 3. Dzidzira Mise en Nzvimbo (zvese zviri munzvimbo yacho). Edza zviyero zvako nguva isati yakwana uye wozvigadzirira usati watanga kusanganisa kuti uderedze mikana yekusiya chimwe chinhu netsaona. 4. Chill makeke ako usati watonhora uye kuzadza. Iwe unogona kuvhara keke yechando uye inotonhorera mune fondant kana uchida. Iri keke zvakare rakanakira kuisira. Ini ndinogara ndichichengeta makeke angu akaomeswa mufiriji ndisati ndasvitswa kuitira nyore kutakura. Dzidza zvakawanda nezve kushongedza yako yekutanga keke. 5. Kana mabikirwo achida zvimwe zvinhu zvakaita seupfu hwekeke, kuchitsiva neupfu hwese hwechinangwa uye chibage chegorosi hazvikurudzirwe kunze kwekunge zvataurwa murutsva kuti zvakanaka. Kuisa zvinongedzo kunogona kukonzera kuti iyi nzira itadze. Hupfu hwese hwehupfu hwakatsetseka hupfu husina maanosimuka. Iine puroteni chikamu che10% -12% Hupfu hwekeke hwakapfava, hwakaderera protein protein ye9% kana pasi.
Kushumira:1kushumira|Makorori:1817kcal(91%)|Carbohydrate:186g(62%)|Mapuroteni:12g(24%)|Mafuta:118g(182%)|Mafuta Akaguta:75g(375%)|Cholesterol:291mg(97%)|Sodium:475mg(makumi maviri%)|Potassium:317mg(9%)|Fiber:1g(4%)|Shuga:149g(166%)|Vhitamini A:3635IU(73%)|Vhitamini C:1mg(1%)|Calcium:127mg(13%)|Iron:1mg(6%)
sitirobheni keke mapepa ane echando sitirobheri
keke rakapfava senge recipe cookie recipe
mabikirwo ekeke nyoro kubva pakutanga
yakarohwa kirimu nekirimu yetartar
maitiro ekugadzira whokoti chokoreti ganache